Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6.2 arịọ ka ọ dị mma
Ejiri ike na-arịọ site na iji usoro ihe atụ iji jikọta data nyocha n'aka mmadụ ole na ole nwere nnukwu data sitere na ọtụtụ ndị mmadụ.
Ụzọ dị iche iche iji jikọta nyocha na nnukwu data data bụ usoro m ga-akpọ ịrị elu ka ị rịọ . N'ịjụ ihe dị ukwuu, onye na-eme nchọpụta na-eji usoro ihe atụ iji jikọta ọnụ ọgụgụ dị omimi nke data nyocha na nnukwu ihe ọmụma data iji meepụta atụmatụ na ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ nnukwu ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na esi na data nweta otu. Otu ihe dị mkpa nke ịrịọ ịrị elu na-abịa site na ọrụ nke Joshua Blumenstock, bụ onye chọrọ ịnakọta data nke nwere ike inyere nduzi aka na mba ndị dara ogbenye. N'oge gara aga, ndị na-eme nchọpụta na-anakọta ụdị data a n'ozuzu ga-ewere otu n'ime ụzọ abụọ: nyocha ma ọ bụ nyocha. Nyocha nyocha, ebe ndị nnyocha na-agba ajụjụ ọnụ ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmadụ, nwere ike ịbụ mgbanwe, oge, na ọnụ ala. Otú ọ dị, nnyocha ndị a, n'ihi na ha dabere na ihe atụ, na-ejedebe na mkpebi ha. Site na nnyocha nyochaa, ọ na-esiri ike ịme atụmatụ maka mpaghara mpaghara ma ọ bụ maka ìgwè mmadụ dị iche iche. N'aka nke ọzọ, gbalịa ịjụ onye ọ bụla ọnụ, ya mere, a pụrụ iji ha mee atụmatụ maka obere mpaghara ala ma ọ bụ ìgwè mmadụ. Ma mkpesa na-adịkarị ọnụ, na-adabere na ya (ha na-agụnye ole na ole ajụjụ), ọ bụghị n'oge (ha na-eme n'usoro oge, dị ka afọ 10 ọ bụla) (Kish 1979) . Kama ịrapagidesi ike n'ọmụmụ nyocha ma ọ bụ ihe ntinye akwụkwọ, were ya ma ọ bụrụ na ndị nchọpụta nwere ike ijikọta àgwà kachasị mma nke abụọ ahụ. Cheedị ma ọ bụrụ na ndị nchọpụta nwere ike ịjụ mmadụ niile ajụjụ ọ bụla kwa ụbọchị. N'ụzọ doro anya, ọhụụ a, nyocha ọ na-eme mgbe nile bụ ụdị echiche efu nke sayensị. Mana ọ na - egosi na anyị nwere ike ịmalite ime nke a site na ijikọta ajụjụ nyocha site na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmadụ site na ọtụtụ ndị mmadụ.
Nnyocha nchọpụta Blumenstock malitere mgbe ya na onye na-arụ ọrụ na ekwentị mkpanaka kachasị ukwuu na Rwanda, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ihe ndekọ ndebanye aha site na nde 1.5 ndị ​​ahịa n'etiti afọ 2005 na afọ 2009. Ihe ndekọ ndị a nwere ihe ọmụma banyere oku ọ bụla na ozi ederede, dịka mmalite oge, oge , na ebe njirimara mpaghara nke onye na-akpọ oku na onye nata. Tupu mụ ekwuo gbasara nsogbu ọnụ ọgụgụ, ọ bara uru igosi na nzọụkwụ mbụ a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe siri ike maka ọtụtụ ndị nchọpụta. Dịka m kọwara na isi nke abụọ, ọtụtụ isi data sitere na ndị na-eme nchọpụta enweghị ihe ịga nke ọma . E nwere ike ịchọta ihe dị iche iche na ekwentị dị iche iche, karịsịa, nke na-enweghị ike ịmebanye aha na ọ ga-abụrịrị ihe ọmụma ndị ga-atụle ga-echebara echiche (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . N'okwu a, ndị na-eme nchọpụta ji nlezianya chebe data ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ na-elekọta ha (ya bụ, IRB). M ga-alaghachi n'okwu ndị metụtara ụkpụrụ omume a n'ụzọ zuru ezu na isi 6.
Blumenstock nwere mmasị iji tụọ akụnụba na ọdịmma. Ma àgwà ndị a abụghị kpọmkwem na ndekọ ndekọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ndekọ ndị a ezughị ezu maka nchọpụta a - ihe dị mkpa nke nnukwu ihe ọmụma data bụ nke a tụlere n'ụzọ zuru ezu na isi 2. Otú ọ dị, o yiri ka ihe ndekọ akụkọ ahụ nwere ike ịnweta ụfọdụ ozi nwere ike inye akụkọ gbasara akụ na ụba. ọdịmma. N'inye ohere a, Blumenstock jụrụ ma ọ ga-ekwe omume ịzụ igwe na-amụ ihe iji kọwaa otú onye ga-esi zaa nnyocha e mere na ndekọ ha. Ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume, mgbe ahụ, Blumenstock nwere ike iji ihe atụ a buru amụma nzaghachi nyocha nke nde ndị ahịa 1.5.
Iji mepụta ma zụọ ihe nlereanya dị otú a, Blumenstock na ndị na-enyere aka na nyocha na Kigali Institute of Science and Technology na-akpọ ihe omimi nke ihe dịka otu puku ndị ahịa. Ndị nnyocha ahụ kọwaara ndị na-eso ụzọ ihe mgbaru ọsọ nke oru ahụ, rịọrọ maka nkwenye ha iji jikọta nzaghachi nyocha ahụ na ndekọ ndekọ, wee jụọ ha ọtụtụ ajụjụ iji tụọ akụnụba na ọdịmma ha, dị ka "Ị nwere redio? "na" Ị nwere igwe eletrik? "(lee nọmba nke 3.14 maka ndepụta nke otu). Ndị niile sonyere na nnyocha ahụ na-akwụ ụgwọ ego.
Na-esote, Blumenstock ji usoro abụọ a na-emekarị n'ịmụ ihe igwe: atụmatụ njikwa na nlekọta anya. Nke mbụ, na nhazi usoro iheomume , maka onye ọ bụla a gbara ajụjụ ọnụ, Blumenstock gbanwere ndekọ ndekọ ahụ dị ka otu njirimara banyere àgwà ọ bụla; ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịkpọ ndị a "atụmatụ" na ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ha "mgbanwe". Dịka ọmụmaatụ, maka onye ọ bụla, Blumenstock chịkọtara ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị na-arụ ọrụ, ọnụọgụ nke ndị dị iche iche mmadụ na-akpakọrịta, ego a na-etinye na oge ikuku, na ihe ndị ọzọ. N'ụzọ dị nkenke, ezigbo njirimara nke njirimara chọrọ ịma ihe nyocha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti oku ụlọ na mba ụwa (anyị nwere ike ịtụ anya na ndị mmadụ na-akpọ mba na-aba ọgaranya), mgbe ahụ, a ghaghị ime nke a na ntinye ihe nhazi. Onye na-eme nchọpụta nke na-enweghị nghọta banyere Rwanda nwere ike ọ gaghị agụnye njirimara a, mgbe ahụ, ịme ihe ngosi nke ihe nlereanya ahụ ga-ata ahụhụ.
N'ikpeazụ, na ntụziaka a na-ahụ maka nlekọta , Blumenstock wuru ihe atụ ịkọ nzaghachi nyocha nke onye ọ bụla dabere na atụmatụ ha. N'okwu a, Blumenstock ji nlezianya ejiji, mana ọ gaara eji ọtụtụ nchịkọta akụkọ ma ọ bụ nke igwe na-eru nso.
Ya mere olee otú o si rụọ ọrụ? Blumenstock nwere ike ịkọ azịza maka nyochaa ajụjụ ndị dị ka "Ị nwere redio?" Na "Ị nwere igwe eletrik?" Site na iji ihe ndị sitere na ndekọ oku? Iji chọpụta njirimara nke ụdị ihe atụ ya, Blumenstock ji nkwenye-agafe , usoro a na-ejikarị na nkà mmụta sayensị ma ọ bụ na ọ dịkarịghị na sayensị mmekọrịta. Ihe mgbaru ọsọ nke nkwado gafere bụ iji nlezianya nyochaa arụmọrụ nke ihe nlereanya site n'ịzụ ya ma nyochaa ya na ihe dị iche iche nke data. Karịsịa, Blumenstock kewara data ya n'ime pasent 10 nke mmadụ 100 ọ bụla. Mgbe ahụ, o jiri mmadụ itoolu na-azụ ihe nlereanya ya, a na-atụlekwa ihe ngosi nke usoro a zụrụ azụ na nkwụsị fọdụrụ. O kwughachiri usoro a ugboro iri-ya na data ọ bụla na-enweta otu ntụgharị dị ka data nkwado-ma wepụta ihe ọ rụpụtara.
Izi ezi nke amụma ahụ dị elu maka àgwà ụfọdụ (nọmba 3.14); dịka ọmụmaatụ, Blumenstock nwere ike ịkọ na 97.6% ziri ezi ma ọ bụrụ na onye nwere redio. Nke a nwere ike iju ezigbo anya, ma ọ dị mkpa mgbe niile iji tụnyere ụzọ mgbagwoju anya dị iche iche iji mee ka ọ dị mfe. N'okwu a, ihe dị mfe bụ ịkọwa na onye ọ bụla ga-enye azịza kachasị. Dịka ọmụmaatụ, 97.3% nke ndị na-aza ajụjụ kọrọ na ha nwere redio ma ọ bụrụ na Blumenstock buru amụma na onye ọ bụla ga - ekwupụta na ọ nwere redio ọ ga - enwe ihe ziri ezi nke 97.3%, bụ ihe ijuanya yiri mmemme nke usoro mgbagwoju anya (97.6% ziri ezi) . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọmụma niile na ntinye ngosi na-eme ka ụba nke amụma ahụ dị na 97.3% ruo 97.6%. Otú ọ dị, maka ajụjụ ndị ọzọ, dị ka "I nwere igwe ịnyịnya?", Amụma ndị ahụ dị na 54.4% na 67.6%. N'ikwu ya n'ozuzu, onu ogugu nke 3.15 negosi na n'ihi ihe ufodu Blumenstock emeghi ka ihe karia karia ime ihe omuma ederede di mfe, ma maka ihe ndi ozo enwere ugbua. Naanị ile anya na nsonaazụ ndị a, Otú ọ dị, ị nwere ike iche na nke a bụ ihe kacha mma.
Onyonyo 3.14: Nzuzo doro anya maka usoro ihe omimi a zụrụ na ndekọ oku. E si na Blumenstock (2014) , tebụl 2.
Onyonyo 3.15: Nkọwa nke ziri ezi maka eziokwu maka usoro nchịkọta akụkọ nke a zụrụ na ndekọ oku gaa na amụma dị mfe. A na - eji nwayọọ nwayọọ eme ihe dị iche iche iji zere imechi ya. E si na Blumenstock (2014) , tebụl 2.
Otú ọ dị, nanị otu afọ ka nke ahụ gasịrị, Blumenstock na ndị ọrụ ibe abụọ-Gabriel Cadamuro na Robert On-bipụtara otu akwụkwọ na Sayensị na nsonaazụ kachasị mma (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . E nwere isi ihe abụọ dị mkpa mere maka mmelite a: (1) ha jiri usoro ndị ọzọ dị ọkaibe (ya bụ, ụzọ ọhụụ maka njikwa na nkà na ụma na usoro ntụgharị dị iche iche iji kọwaa nzaghachi site na njirimara) na (2) kama ịnwa ịzaghachi onye ọ bụla ajụjụ nyochaa (dịka, "Ị nwere redio?"), ha nwara ịmepụta ihe odide akụ na ụba. Mgbanwe ndị a na-arụ ọrụ pụtara na ha nwere ike ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị n'iji ihe ndekọ akuko iji kwuo akụnụba maka ndị mmadụ na sample ha.
Otú ọ dị, ịkọwa akụnụba nke ndị mmadụ n'ihe atụ ahụ abụghị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke nchọpụta ahụ. Cheta na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ iji jikọta ụfọdụ n'ime atụmatụ kachasị mma nke nyocha nyocha na mkparị iji mepụta atụmatụ ziri ezi, nke dị elu nke ịda ogbenye na mba ndị ka na-emepe emepe. Iji chọpụta ikike ha nwere iji mezuo ihe mgbaru ọsọ a, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ha ji ihe nlereanya ha na data ha buru amụma banyere akụnụba nke nde mmadụ 1.5 na ndekọ oku. Ha na-ejikwa ozi ntanetị nke agbakwunyere na ndekọ ndekọ (cheta na data gụnyere ebe nke ụlọ elu kacha nso maka oku ọ bụla) iji chọpụta ebe obibi nke onye ọ bụla (nọmba 3.17). N'ịkọ atụmatụ abụọ a ọnụ, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya mepụtara atụmatụ nke nhazi ala nke ndị na-enwetakwa akụ na ụba na ezigbo ụlọ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịchọpụta ego ole na ole n'ime mkpụrụ ndụ 2,148 dị na Rwanda (ụlọ ọrụ nchịkọta kacha nta na mba ahụ).
Kedu ka atụmatụ ndị a si kwekọọ n'ọnọdụ ịda ogbenye dị na mpaghara ndị a? Tupu m zaa ajụjụ ahụ, achọrọ m imesi eziokwu ahụ ike na e nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji nwee obi abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ike ịme amụma na ọkwa ọ bụla dị mma (nọmba 3.17). Ma, ma eleghị anya, nke ka mkpa, ndị nwere ekwe ntị nwere ike ịdị iche iche na ndị na-enweghị ekwe ntị. Ya mere, Blumenstock na ndị ọrụ ibe gị nwere ike ịta ahụhụ site na ụdị njehie njehie nke mere nchọpụta 1936 Literary Digest nke m kọwara na mbụ.
Iji nweta echiche nke atụmatụ nke atụmatụ ha, Blumenstock na ndị ọrụ ibe gị chọrọ iji ha tụnyere ihe ọzọ. N'ụzọ dị mma, n'otu oge ahụ ka ha na-amụ ihe, otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta nọ na-eme nchọpụta banyere omenala ndị ọzọ na Rwanda. Nyocha ọzọ a-nke bụ akụkụ nke usoro ọgụgụ isi nke Demographic na Health Survey - nwere nnukwu ego ma jiri ụzọ dị elu, usoro omenala. Ya mere, a na-atụle atụmatụ ndị si na Demographic na Health Survey nwere ike ịlele dịka ọla-edo. Mgbe e jiri atụmatụ abụọ ahụ tụnyere ha, ha yiri nke ahụ (nọmba 3.17). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, site na ijikọta ọnụ ọgụgụ nke data nyochaa na ndekọ ndekọ, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ha nwere ike ịmepụta atụmatụ ndị yiri nke ndị na-esite na ọlaedo.
Onye nwere obi abụọ nwere ike ịhụ nsonaazụ ndị a dị ka ndakpọ olileanya. E kwuwerị, otu ụzọ na-ele ha anya bụ ikwu na site na iji nnukwu data na igwe na-amụ ihe, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ha nwere ike ịmepụta atụmatụ ndị nwere ike ịme ka ndị ọzọ nwee ike ịdabere na ya. Mana echeghị m na ọ bụ ụzọ ziri ezi isi chee banyere ọmụmụ ihe a maka ihe abụọ. Nke mbụ, ọnụahịa ndị Blumenstock na ndị ọrụ ibe gị dị ihe dị ka ugboro iri ọsọ ọsọ ma dịkarịa ala karịa 50 (mgbe a tụrụ ọnụ ahịa na ọnụahịa ndị na-agbanwe agbanwe). Dịka m na-atụle na mbụ na isi nke a, ndị nnyocha na-eleghara ụgwọ anya na nsogbu ha. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ego na-apụta na ọ bụghị iji ọsọ na-agba ọsọ ọ bụla afọ ole na ole-dị ka ihe gbasara Ọmụmụ Demographic na Nchọpụta Ahụ Ike - ụdị nyocha a nwere ike ịme kwa ọnwa, nke ga-enye ọtụtụ ndị ọkachamara na iwu ndị na-eme ihe. Ihe nke abụọ mere ị ga-eji ghara iche echiche ahụ bụ na ọmụmụ a na-enye ụzọ nchịkọta dị mfe nke a ga-ahazi n'ọtụtụ ọnọdụ nyocha dịgasị iche iche. Ntụziaka a nwere nanị ihe abụọ na ụzọ abụọ. Ihe ndị na-emepụta bụ (1) nnukwu isi iyi data nke dị oke ma dị mkpa (yabụ, ọ nwere ọtụtụ ndị ma ọ bụghị ozi ị chọrọ banyere onye ọ bụla) na (2) nnyocha nke dị warara ma dị oke (yabụ, ọ nwere naanị mmadụ ole na ole, ma ọ nwere ozi ị chọrọ banyere ndị ahụ). A na-emezi ihe ndị a na nzọụkwụ abụọ. Nke mbu, maka ndi mmadu n'ime akwukwo data abuo, mepee ihe omumu nke muta nke na eji nnukwu ihe omuma data iji mata nzaghachi nyocha. Na-esote, jiri ihe nlereanya ahụ mee ka nchọpụta nyocha nke onye ọ bụla nọ na nnukwu data data. Ya mere, ọ bụrụ na e nwere ajụjụ na ịchọrọ ịjụ ọtụtụ mmadụ, chọpụta nnukwu data sitere na ndị ahụ nwere ike ịkọwa azịza ha, ọbụlagodi ma ị chọghị ịma nnukwu ebe data . Nke ahụ bụ na Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya anaghị eche banyere ihe ndekọ oku; naanị ha na-eche banyere ihe ndekọ akụkọ ọkpụkpọ n'ihi na ha nwere ike iji amụma ịchọta azịza nyocha na ha lekọtara. Ụdị njirimara a-ọ bụ nanị mmasị na-enweghị mmasị na nnukwu ihe ọmụma data-na-eme ka ịrị elu jụọ dị iche site na ịjụ ajụjụ, nke m kọwara na mbụ.
Ihe nyocha 3.16: Usoro nke ọmụmụ ihe site na Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . A kpọgharịrị ndekọ sitere na ụlọ ọrụ ekwentị gaa na matriks na otu ahịrị maka onye ọ bụla na otu kọlụm maka àgwà ọ bụla (ya bụ, agbanwe). Ọzọ, ndị na-eme nchọpụta wuru ihe nlereanya nke a na-ahụ maka ịkọ nzaghachi nnyocha ndị ahụ sitere na matriks na-ahụkarị. Mgbe ahụ, a na-eji ihe nlereanya nchịkwa a na-ahụ anya mee ka nzaghachi nyochaa maka ndị ahịa niile dị nde 1.5. Ọzọkwa, ndị na-eme nchọpụta mere atụmatụ na ebe obibi ga-adịru maka ndị ahịa 1.5 nde nile dabere na ọnọdụ nke oku ha. Mgbe atụmatụ abụọ ahụ-akụ na ụba e kpebiri na ebe obibi a tụrụ anya ya, ihe ndị a yiri nchịkọta sitere na nchọpụta nke mmadụ na ahụ ike, nchọpụta ọdịnala edo edo (nọmba 3.17).
Ihe odide nke 3.17: Ihe si na Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Na ọkwa nke onye ọ bụla, ndị nchọpụta ahụ nwere ike ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị na ịkọwa akụ mmadụ site n'akụkọ ndekọ ha. Atụmatụ nke akụ na ụba mpaghara maka ógbè 30 nke Rwanda - nke dabere na atụmatụ onye ọ bụla nke akụ na ụba na ebe obibi-dịka ihe si na nchọpụta Demographic na Health Survey, nyocha nke omenala ọlaedo. E si n'aka Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , ọnụ ọgụgụ 1a na 3c.
Na njedebe, njiri ihe ịrị elu nke Blumenstock jikọtara data nchọpụta na nnukwu ebe data iji mepụta atụmatụ ndị yiri nke ndị nyocha na-acha edo edo. Ihe omuma a na-achota ufodu n'ime ahia ndi ozo n'agbata oku ajuju na usoro ihe omumu. Ọnụ ọgụgụ a na-achọ ịrị elu na-abawanye n'oge, ọ dị ọnụ ala karị, na ndị ọzọ granular. Ma, n'aka nke ọzọ, a kabeghị usoro ndabere siri ike maka ụdị arịrịọ a dị elu. Ihe omuma a egosighi mgbe uzo a ga-aru oru na mgbe o gaghi adi, ndi ozo jiri uzo a kwesiri inwe nchegbu banyere ihe ndi mmadu nwere ike ime-na onye n'emeghi ya-n'ime nnukwu ihe omuma ha. Ọzọkwa, usoro ịrịọ ịrị elu a ka enwebeghị ụzọ dị mma iji mee ka a ghara ịmata ihe ọ bụla. Ọ dị mma na ịrịọ ịrị elu nwere njikọ chiri anya na mpaghara atọ dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ-obere atụmatụ (Rao and Molina 2015) , ntinye aka (Rubin 2004) , na ndabere nke ndabere (nke onwe ya nwere njikọ chiri anya na Mr. P., ụzọ m kọwara na mbụ na isi) (Little 1993) . N'ihi njikọ miri emi ndị a, ana m atụ anya na ọtụtụ n'ime usoro ntọala nke ịrịọ ịrị elu ga-adị mma n'oge na-adịghị anya.
N'ikpeazụ, ịtụle nchọpụta mbụ na nke abụọ nke Blumenstock na-egosipụtakwa otu ihe dị mkpa banyere nchọpụta mmekọrịta mmadụ na afọ-afọ: mmalite abụghị njedebe. Nke ahụ bụ, ọtụtụ mgbe, ụzọ nke mbụ agaghị abụ nke kachasị mma, ma ọ bụrụ na ndị na-eme nchọpụta anọgide na-arụ ọrụ, ihe ga-aka mma. N'ikpeazụ, mgbe ị na-atụle ụzọ ọhụrụ maka nchọpụta mmadụ na oge dijitalụ, ọ dị mkpa ime nyocha abụọ: (1) Olee otú ọrụ a dịruru mma ugbu a? na (2) Olee otú ọrụ a ga-esi dị mma n'ọdịnihu dị ka mgbanwe ntụgharị ihu igwe na dịka ndị nyocha na-etinyekwu uche na nsogbu ahụ? Ọ bụ ezie na a zụrụ ndị na-eme nchọpụta iji mee ụdị nyocha mbụ ahụ, nke abụọ bụ ihe dị mkpa karị.